Nandar Lwin, Author at Lifestyle Myanmar - Page 206 of 215
အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်မြဲခြင်းဆိုသည်မှာ နှစ်ဦးစလုံးကြိုးစားရင် လွယ်ကူတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တစ်ယောာက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်သူဘ၀ကလိုမျိုး ဂရုစိုက်မှုတွေ လျော့ပါးလာနိုင်တာကြောင့် အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ရှားပါးကြပြီး စုံတွဲတိုင်းမှာ အခက်အခဲတွေ၊အဆင်မပြေမှုတွေ၊ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းတွေနဲ့ ဥပေက္ခာပြုတတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုကြုံတွေ့လာရတဲ့အခက်အခဲတွေကို အချိန်ယူပြီးပြန်လည်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် သိပ်မခက်ခဲတဲ့...
ဒီ၂၀၁၈မှာ အ၀တ်အစားအရောင်တွေကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုပေါင်းစပ် ၀တ်ဆင်မလဲ?
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖက်ရှင်တစ်ခုမှာ အရောင်ပေါင်းစပ်မှု မှန်ကန်ခြင်းက အဓိကကျပါတယ်။ အရောင်တွဲဖက်မှုတွေက သင့်ရဲ့ဝတ်စုံကို ပြီးပြည့်စုံစေ သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အ၀တ်အစားဝတ်တဲ့အခါ အရောင်ပေါင်းစပ်မှု မှန်ကန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် 2018မှာ သင့်ကို ဖက်ရှင်ကျကျနဲ့ လှနေဖို့အတွက် ဘယ်လိုအရောင်လေးတွေ...
ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရှုခြင်းဟာ မှန်ကြောင်း၊ မှားကြောင်းကို မဆိုလိုပေမယ့် ကြည့်ရှုသူနဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်ရတဲ့သူအပေါ်မှာတော့ မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရှုခြင်းဟာ အပန်းဖြေခြင်းတစ်မျိုးလို့ ယူဆလို့မရပဲ စွဲစွဲလန်းလန်း ကြည့်ရှုတတ်ခြင်းကြောင့် အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်တာကြောင့် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတာကို Lifestyle Myanmar...
ရှိရင်းစွဲထက် ပိုပြီးရုပ်ရင့်အောင် ပြုလုပ်နေမိတဲ့ နေ့စဉ်အလေ့အထ ၁၀မျိုး
အိုမင်းခြင်းက ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်တဲ့ အစားအစာ၊ သဘာဝ ဂေဟစနစ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာပုံပန်းသဏ္ဍာန်အတွက် ဂရုစိုက်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းနှင့် အလေ့အထဆိုးတို့က အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းခြင်းကို ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်အမင်းဝခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများကလည်း အလှအပကို ပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။...
ဖလန်နယ်ရှပ်အကျီ င်္လေးတွေက ၀တ်တဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး စတိုင်ကျ လှပစေပါတယ်။ ဖလန်နယ်ရှပ်အကျီင်္ကို ယောကျာ်းလေးကော မိန်းကလေးပါဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ ယခုအမျိုးသမီးတွေအတွက် ဖလန်နယ်အကျီ င်္ ကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုတွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ရမလဲဆိုတာ အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ဖလန်နယ်ရှပ်အကျီ...
မီနီစကတ်များက နွေရာသီအတွက် အကောင်းဆုံး အ၀တ်အစားတစ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ၀တ်ရတာပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိပြီး လူငယ်ဆန်စေပါတယ်။ မီနီစကတ်က သွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးများနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်အများစု ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နွေရာသီ ဖက်ရှင် – ကျားသစ်ကွက် မီနီစကတ်...
အိမ်မှာ ဘုရားပန်းအိုး၊ အလှပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ ရာသီဥတုပူတာကြောင့် ပန်းတွေကကြာရှည်မခံပဲ ညှိုးသွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေများတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ကြာရှည်လတ်ဆတ်စေမယ့် ပန်းထိုးနည်းလေးကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေဖို့ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အရာ ၃ခု ၁။အ၀ကျယ်ပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ အိုးအလွတ်ထဲမှာ ပန်းပွင့်ကိုထည့်ပါ။ အမြဲတမ်းသန့်ရှင်းတဲ့...
ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နွေရာသီ ဖက်ရှင်
ဆယ်ကျော်သက်မ်ိန်းကလေးတွေအတွက် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေက မတူညီတဲ့ ဒီဇိုင်း၊ အရောင်များနဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ နွေရာသီမှာ သင်တန်း၊ အလုပ်၊ ပါတီ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်တဲ့ခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိမယ့် အ၀တ်အစားမျိုးကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ နွေရာသီအ၀တ်အစားများက...
ဘဝဟာ ခနျ့မှနျးရခကျတဲ့ အရာတဈခုဖွဈပွီး တဈခါတဈလမှော တခြို့အမှနျတရားတှကေို လကျခံဖို့တောငျမှ တကယျ့ကို ခကျခဲတဲ့အရာတဈခုပါ။ တခြို့သောအရာတှဟော သငျကွိုကျသညျဖွဈစေ၊ မကွိုကျသညျဖွဈစေ ဖွဈပှားနတောကွောငျ့ ဒီလိုအရာတှကေို ရငျဆိုငျဖို့သငျ့ရဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာကို အဆငျသငျ့ပွငျထားရမှာ ဖွဈပွီး လကျခံနိုငျဖို့ကွိုးစားရပါလိမျ့မယျ။ နှလုံးသားနာကငျြရမှုတှကေို လူသားတိုငျးရှောငျလှဲလို့မရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျဟာသင်ျခါရတရားကို...
တက္ကသိုလ်တွေက ကမ္ဘာကြီးကို အကျိုးပြုတဲ့ ပညာတတ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာကို မွေးထုတ်ပေးတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တွေကလလူ့ဘ၀တစ်လျောက်မှာ အမှတ်ရစရာတွေကျန်ခဲ့တဲ့ တစိတ်တစ်ပိုင်းဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ နိုင်ငံတစ်ကာက ကျော်ကြားပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလှအပများနဲ့ တက္ကသိုလ်များအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Notre Dame အိုင်ဒါဟိုတက္ကသိုလ်...
Page 206 of 215 Prev 1 … 205 206 207 … 215 Next